Murashaxiinta mucaaradka oo dhexdooda is kala reebaya - Caasimada Online
Home Warar Murashaxiinta mucaaradka oo dhexdooda is kala reebaya
Murashaxiinta mucaaradka oo dhexdooda is kala reebaya
Muqdisho (Caasimada Online) – Doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare, ayaa bannaanka keentay guuldaro siyaasadeed oo soo wajahday murashaxiintii Nabad iyo Nolol.
Kooxaha mucaaradka ee u midoobay ayaa qaatay dhammaan kuraasti guddoonka ayada oo doorashooyinkaasi aysan kusoo bixin wax musharax Nabad iyo Nolol ah, taasi oo mucaardka ay u arkaan mid bilow fiican u ah in dhabarka la jabiyo Nabad iyo Nolol.
Mucaaradka waxay is-bideen guul siyaasadeed inay gaareen, iyagoona iska dhaadhiciyay in laga guuleystay Nabad iyo Nolol, guuldarada ku dhacdayna laga tixraaci karo doorashada madaxweynaha qaabka ay noqon karto, waxayna xaqiiqsadeen guul aan la hubin halka ay ku danbeyn doonto.
Guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo ah mucaaradka, gaar ahaan xisbiga Himilo Qaran, islamarkaana guddoomiyenimadii uu ka hayey maalmo kahor iska casilay ayaa guushiisa waxay xaqiijisay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed boorka iska jafo, waxayna kooxdiisa ololaha doorashada dhexdooda qireen in madaxweynaha soo socda saadaaliyaan inuu Shariifka yahay, waxay bilaabeen dacaayado iyo dagaal hoose oo murashaxiinta kale ku fogeynayaan.
Kooxda Sheekh Shariif ee dhinaca warbaahinta u qaabilsan ayaa waxay sidoo kale billaabeen borobogaando ay ku marin habaabinayaan shacabka, iyagoo adeegsanaya sawirrada kulamada siyaasadeed ee madaxda iyo ra’iisul wasaare Rooble la yeelanaya, iyagoo ka dhigaya Sheekh Shariif murashaxa hoggaaminaayo kulamada siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka ee mucaaradka lagala tashanayo.
Xafiiltanka siyaasadeed ee murashaxiinta ayaa ah kan ugu daran mid ay kooxda ololaha ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ku qaadayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Labada dhinac ayaa ololahooda si xowli ah u socdaa, wuxuuna mid walba ku jiraa dagaal hoose oo laga warqabin, kaasoo guntiisa tahay colaadii hore iyo in Xasan Cali Kheyre lagu riixaayo Nabad iyo Nolol oo horay ugu tirsanaa. Sidoo kalena saadaasha mucaaradka kale ay tahay in haddii Farmaajo wareega koowaad ku guuldareysto in codkiisa ugu shubi doono Xasan Cali Kheyre si walbo haku dhacdee.
Xasan Cali Kheyre oo eed siyaasadeed iyo colaad kaleba kala dhaxeysay mucaaradka intii uu ahaa Nabad iyo Nolol ma jirto meel uu cudur daar ku siiyay madaxweyneyaashii hore ee Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed, waana sababta xifaaltanka keenay taasi.
Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Puntland ee farqaha la haysto, waxaa culeys siyaasadeed uu ka heystaa deegaankii uu ka yimid ee Puntland, Deni ololahiisa doorashada waa siyaasiga kaliya ee suuqa soo geliyay dhaqaalaha ugu badan.
Hamigiisa doorasho, marka laga soo tago, colaada uu u haayo Farmaajo waa mid gaamurtay, ololahiisana waxaa qeyb ka ah dagaal uu ugu jiro inaan dib danbe loo dooran Farmaajo.
Xiriirka kala dhaxeeya murashaxiinta kale waa mid aan cago badan ku taagneyn oo mar walbo la filan karo inuu lugta uu kula jiro mucaaradka kala baxo, waxaase loo arkaa murashax codkiisa gorgortan siyaasadeed aakhirka ku gala.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ololahiisa la dhayalsan karin waa hoggaamiyaha kaliya ee shantii sano lasoo dhaafay kaligiis cindiyaha kula dagaalamay Farmaajo, hadda wuxuu u muuqdaa inuu dhabarka jeedin doono kooxdii uu ka tirsanaa ee mucaaradka, wuxuu bilaabay ololeysi ku dhisan qabiileysi iyo in uu soo dhoweysto xubnaha ku madalaayo baarlamaanka Somalia.
Wuxuu kalsooni ka raadsaday madaxweynaha Galmudug, ra’iisul wasaare Rooble iyo cid kasta oo uu u arko inay iibin karaan.
Murashaxiinta miisaanka leh, sida Dahir Maxamuud Geelle, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdulqaadir Cosoble ayaa ah kuwo qunyur socod ah oo gooni daaq ah, mid walbana wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu u kasban lahaa xildhibaanada cusub ee qaangaarka aheyn.
Gabagabadii, murashaxiintii u midowday Farmaajo ee wacdaha dhigay doorashadii guddoonka baarlamaanka, maanta uma muuqdaan kuwo ku mideysnaan doono in xilka la dhaafsiiyo Farmaajo, isku maqnaanshahooduse waxay fursad dahabi ah u noqon kartaa Nabad iyo Nolol.